जोखिममा नाका, यसरी प्रवेश गर्दैछ नेपालमा ओमिक्रोन ! - Khojpatro
जोखिममा नाका, यसरी प्रवेश गर्दैछ नेपालमा ओमिक्रोन ! पुष २१ गते ३ जना संक्रमित फेला परेकोमा २२ गते १६ जना, २३ गते १ सय ५ जना, २४ गते ४९ जना, २५ गते २९ जना र २६ गते दिउसो सम्म २७ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
प्रतिक पौडेल २७ पुष २०७८, मंगलवार १३:३७
भैरहवा । रुपन्देही जिल्ला भारतिय सिमा नाका संग जोडिएको जिल्ला हो । जिल्लाको करिव ६० किलोमिटर क्षेत्रफल भारतिय सिमा नाकामा पर्दछ । अहिले भारतमा ओमिक्रोनका कारण स्थिती भयावह छ । भारतमा दैनिक १ लाख भन्दा बढि संक्रमित देखापर्न थालेको पनि थुप्रै भइसकेको छ ।
रुपन्देहीको सिमा भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ । आवतजावत खुल्ला छ । यहाँ दैनिक र घरायसी कामका लागि पनि दिनहुँ मानिसहरु सीमा पार आउजाउ गरिरहन्छन् । यो अवस्थामा कोभिडको अर्को लहर रोक्न थप चुनौतीपूर्ण छ ।
खुल्ला सीमाका कारण दिनहुँ भारतमा रोजगारीमा गएका र अन्य कामले भारत आउजाउ गर्नेहरु लर्को कम हुने छाँटकाँट देखिदैन । बरु उल्टै भारतमा संक्रमण बढिरहँदा रोजगारीमा समस्या आउन सक्ने सम्भावनाको डरले स्वदेश फर्कनेहरूको चाप बढ्दै छ । यस हिसाबले सीमामा कोभिड ओमिक्रण संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना तीव्र गतिमा रहेको छ ।
बेलहिया हेल्थ डेक्सको स्वास्थ्यकर्मी संगिता केसीले भारत बाट आउने एउटा टोलीको आधा ब्यक्तीमा कोभिड देखिने गरेको बताइन् । केसीका अनुसार नाकामा आफुहरु जोखिम पुर्ण अवस्थामा काम गरेको जानकारी दिइन् । “गत चैत देखि खटेका छौ असार यताको जोखिम भत्तानै पाएका छैनौ, कोभिड ह्वात्तै बढेको छ त्रासमा छौ “ केसीले भनिन् ।
रुपन्देहीको प्रमुख नाका बेलहियामा केही साता अघि सम्म भारत पस्नेको लर्कोनै लाग्ने गरेको थियो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । भारतमा ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण स्थिती भयाभह भएसंगै यसको असर सिमा नाकामा प्रष्ट रुपमा देखिन थालेको छ । अहिले बेलहिया नाकामा स्थिती डरलाग्दो भएको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट भारतमा फैलिए यता नाकामा ३३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ ।
कोरोना संक्रमण सुरु हुनुअघिसम्म यतिबेला नाकामा काम खोज्दै भारत पस्नेको लर्को देखिन्थ्यो । संक्रमण सुरु भएपछि पनि गत वर्ष यति बेला भारत पस्नेको संख्या ठूलो थियो ।
कठ्यांग्रिँदो चिसोमा समेत काम खोज्दै भारत जाने गरेका प्रशस्तै भेटिन्थे तर यसपटक भने हिउँदमा कामको खोजीमा जानेभन्दा घर फर्किनेको लर्को देखिन थालेको छ । पछिल्लो एक सातायता घर फर्किने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
बेलहिया स्थित हेल्थ डेस्कका अनुसार ओमिक्रोन भेरियन्ट भारतमा फैलिए यता करिव २८ हजार ८ सय ३३ जना नेपाल प्रवेश गरेकाहरुको अन्टिजेन्ट परिक्षण गरिएको छ । अहिले नाकामा कामको खोजीमा भारततर्फ दैनिक ४÷५ सय जना मात्रै जाने गरेका छन् ।
नाकामा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता बढाएको बताउदै आएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषीराम तिवारीले सिमा नाकामा ओमिक्रोन भेरियन्ट पहिचान गरि ब्यवस्थापन गर्न रुपन्देहीमा उच्च सतर्कता अपनाइएको बताए । तिवारीले सिसिएमसीको निर्णय अनुसार आफुहरु अघि बढ्ने जनाकारी दिए ।
रुपन्देहीको बेलहिया र ककरहवा नाकामा मात्र एन्टिजेन्ट परिक्षण गरेर नेपाल प्रवेश गराउने गरिएको छ । तर अन्य नाकामा भने सतर्कता अपनाइएको छैन ।
बेलहिया नाकाको तथ्याङ हेर्ने हो भने पुष २१ गते यता संक्रमितहरु फेला पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको देखिएको छ । पुष २१ गते ३ जना संक्रमित फेला परेकोमा २२ गते १६ जना, २३ गते १ सय ५ जना, २४ गते ४९ जना, २५ गते २९ जना र २६ गते दिउसो सम्म २७ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
रुपन्देहीमा बेलहिया र ककरहवा बाहेक मुख्यत भगवानपुर, वर्गदहवा, केउटलिय, मैनहिया, मेउडिहवा, मर्वचार लगायत क्षेत्र बाट उल्लेख्यनिय मात्रामा आवात जावत हुने गरेको छ । तर यस क्षेत्रमा रहेका नाकाहरुमा कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड र सतर्कता अपनाएको देखिदैन ।
प्रशासन यस बिषयमा मौन छ । प्रशासन बेलहिया र ककरहवा नाकाको बिषयमा केही सतर्क भएजस्तो देखिएपनि रुपन्देहीमा मानिषहरुको आवातजावत हुने दर्जन भन्दा बढि अन्य नाकाको बिषयमा अझै केही योजना बनाएको जस्तो देखिदैन ।